Imida yeMivuzo yeMathematika | Martech Zone
NdineKhadi leMivuzo yeMida okwethutyana kwaye ndinemeyile endinayo endinokuyisebenzisa. Ndingene kwi-Intanethi kwaye ndibhaliswe kwiwebhusayithi yabo. Ngelo xesha, bafuna ukundibulela ngobhaliso kwaye bandivuza ngokhetho olunye kwezi zintathu:
I-20% isuswe kwinto enye xa ndichitha i $ 20 okanye nangaphezulu
Isiselo esisimahla se-12oz
$ 10 xa ndichitha i $ 50 okanye nangaphezulu
Ngaba ukhona omnye umntu okufumanisa kuhlekisa ukuba # 1 kunye # 3 ziyafana? Ukuba ndichitha i- $ 50, ngaba isikhuthazi asifanele sibe ngaphezulu kwama-20%?
Mhlawumbi ndim nje. Ndiyayixabisa, nangona kunjalo! Kwaye… ndiyayithanda imida!
Mar 6, 2007 ngo 10:48 PM
I-20% isuswe kwi-100 yeedola = $ 20 isaphulelo
$ 10 off 100 = $ 10 isaphulelo
Agasti 9, 2007 kwi-2: 07 AM
Kungenxa yoko le nto isihloko esithi 'imida inomvuzo wezibalo', oko kukuthi, akukho zibonelelo zokuthatha i- $ 10 isuswe kwi $ 50 okanye ngaphezulu ikhuphoni.
Umahluko phakathi ko-1 no-3 kukuba # 1 unokusetyenziswa kwinto enye. # 3 yenzelwe izinto ezingenamda.